संसदमा जनार्दन शर्माको आक्रोशः नेपाल ट्रष्टले श्वेतपत्रको नाममा अश्वेतपत्र निकाल्यो « Sansar News
संसदमा जनार्दन शर्माको आक्रोशः नेपाल ट्रष्टले श्वेतपत्रको नाममा अश्वेतपत्र निकाल्यो
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:११
१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा हालैमात्र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्र झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे।
आफू गृहमन्त्री हुदाँ कहिले पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा प्रवेश नगरेको भन्दै त्यसमा म संलग्न भएको भनि कसरी श्वेतपत्र जारी भयो भन्दै उनले जवाफ मागे। रक्षामन्त्री पोखरेल अध्यक्ष भएको ट्रष्टको जग्गा वितरणमा संलग्नमा उल्टो नीति सुरु भएको टिप्पणी उनले गरे। ‘जग्गा दिनेहरुको नाम नलेख्ने तर संलग्न नै नभएको मानिस संलग्न भयो भनि झुठा विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘ यो श्वेतपत्र हो कि अश्वेत पत्र हो।’
शर्माले भने मलाई तर्साउन खोजिएको हो। आत्मसर्मपण गराउन खोजिएको हो। सरकारले मलाई ढाँट्न सक्ला तर सरकारलाई कसरी ढाँट्न सक्छ ? कसरी विश्वास गर्ने ? विश्वासको संकट भयो। लेख्नुपर्नेको नलेख्ने तर लेख्नै नपर्नेहरुको किन लेखियो।